व्यापारघाटा चुलियो : ३ महिनामा ३ खर्ब ४९ अर्ब बढी - arthamandu
गृहपृष्ठ व्यापारघाटा चुलियो : ३ महिनामा ३ खर्ब ४९ अर्ब बढी
९ मंसिर, काठमाडौं । आयत प्रतिस्थापन गरि निर्यात बढाउने भनेर सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाई रहन्दाँ मुलुकमा आयत भने बढ्दो छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा नै कुल बस्तु आयत ४५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर ३ सय ४९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंक द्धारा सार्वजानीक तथ्यांक अनुसार ३ महिनामा कुल वस्तु निर्यात भने १६ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात २३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयत अत्याधिक भएका कारण ३ महिनामा मात्र मुलुकले कुल ३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यापार घाटा खेपेको छ ।
समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात ४३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात ४० दशमलव ८ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात ४५ दशमलव ९ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात ५० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाज तथा पार्टपूजा, एम.एस. बिलेट, सवारी साधन तथा पार्टपूर्जा, अन्य मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने दुरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्ट, कच्चा भटमासको तेल, भिडियो टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण तथा औजार लगायतका वस्तुहरुको आयात भने घटेको छ ।
यसैगरि चालु आचर्थिक बर्षको तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यात १६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ८ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ २० दशमलव २ प्रतिशत, चीनतर्फ १४ दशमलव ४ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ११ दशमलव २ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ ।
वस्तुगत आधारमा पोलिष्टर यार्न, जस्तापाता, ऊनी गलैचा, पश्मिना, दन्तमञ्जन लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलंैची, रोजिन, छाला, जि.आई. पाईप, अल्मुनियम लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ । सार्वजानीक तथ्यांक अनुसार भन्सार नाकाका आधारमा सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालय, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय, कृष्णनगर भन्सार कार्यालय, कैलाली भन्सार कार्यालय, कन्चनपुर भन्सार कार्यालयबाट गरिएको निर्यातमा ह्रास आएको छ भने अन्य भन्सार नाकाहरूबाट गरिएको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, आयाततर्फ समीक्षा अवधिमा कन्चनपुर भन्सार कार्यालयबाट भएको आयातमा ह्रास आएकोछ भने अन्य नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा ४५ दशमलव ९ प्रतिशतले विस्तार भई ३ खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । सो अवधीमा निर्यात–आयात अनुपात ६ दशमलव ४ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
पछिल्लाे - नबिल बैंक लिमिटेडले ३ लाख रुपैयाँ सम्मको उपचार खर्च दिने
अघिल्लाे - एडिबीद्वारा १६ अर्ब ९२ करोड विकास सहायता